Momba anay - Riqi (Hangzhou) Technology Co., Ltd.
Riqi (hangzhou) teknolojia co. Ltd. Hatramin'ny 2010, izahay dia nanokana ny fampitomboana ny fampiasam-bola amin'ny fanamboarana, atrikasa,
sy ny fitaovana, mampiditra teknika sy siansa mandroso avy any amin'ny firenena vahiny.
Riqi Ny sivana dia miorina amin'ny vahaolana mahomby amin'ny filtration ary serivisy fahaiza-manao amin'ny indostrian'ny filtration. Mahazo fahombiazana amin'ny tetik'asa fanaraha-maso ny famoahana vovoka sy tetikasa fanadiovana ao amin'ny foibe famokarana herinaratra Coal Fired Boiler, Fofona fipoahana ao amin'ny orinasa vy, tranokala fampifangaroana Asphalt ary lafaoro Simenitra, indostria simika, sns.
Izahay dia manokan-tena amin'ny fanomezana vahaolana vahaolana filtration ara-toekarena, mahomby sy voatsara indrindra, ny fifehezana ny emission hatramin'ny <15mg / m3, , hamaha tanteraka ny fenitra fanaraha-maso PM2.5, ny fiainana miasa sivana vovoka dia 20% lava kokoa noho ny hafa.
Ny orinasanay dia manana tanjaka fanamboarana matanjaka, ary ny vokatra isan-taona amin'ny fanivanana fitaovana, kitapo vovoka manangona, tsindrona fanjaitra ary lamba sivana tsy tenona.
Nomena mari-pankasitrahana ny orinasanay ISO9001, mahatratra ny ambaratonga avo lenta iraisam-pirenena sy eto an-toerana amin'ny alàlan'ny kalitao, ahazoana ny fahatokisan'ny mpanjifa an-trano sy ivelany.
Ireo vokatra dia naondrana tany Azia atsimo atsinanana, Azia afovoany, Eoropa, Aostralia, Amerika sns, mihoatra ny 40 firenena.
Maninona no azo itokisana isika?
Ny adidintsika dia ny manatsara sy manatsara ny fahombiazan'ny sivana vovoka ho an'ny fifehezana ny fahalotoan'ny rivotra.
Miezaka hatrany izahay manatsara ny vokatra sy serivisinay ho tombontsoan'ny mpanjifanay - manome fiainana lava maharitra amin'ny sivana vovoka sy ny fihenan'ny entona.
Ny fihaonana amin'ny andrasan'ny mpanjifa dia nifantohan'ny fitantanana kalitao hatrany .Ny fivoaran'ny vokatra tsy tapaka dia nametraka ny fenitra ho an'ny vahaolana vaovao amin'ny haitao filtration.
Fitaovana fanivanana mari-pana ambony:
Nahatsapa ny fanjaitra Aramid, nahatsapa ny fanjaitra FMS, nahatsapa fanjaitra fiberglass, nahatsapa fanjaitra PTFE, fitaovana fanivanana horonantsary, fahatsapana fanjaitra P84, fahatsapana fanjaitra PPS, fitaovana sivana tsy tenona.
Izy ireo dia ampiharina amin'ny fampiasana fanesorana vovoka maripana avo lenta amin'ny indostrian'ny metallurgy sy ny fofona, mandà ny fandoroana, ny famokarana herinaratra, ny fitaovana fanoherana ny hafanana, ny fikorontanana bitumen, ny arina, ny simenitra, ny koka, ny boera mandoro solika sns
Fitaovana fanivanana mari-pana ara-dalàna:
Polyester, polypropylene fanjaitra tsapa, anti-static fanjaitra polyester nahatsapa.
menaka sy rano manohitra ny fanjaitra polyester, fitaovana fanivanana polyester-membrane ary fitaovana fanivanana tenona, izay mety amin'ny fanivanana karazana entona setroka hafanana mahazatra.
Lamba sivana tenona, lamba sivana monofilament, fahatsapana fanjaitra polypropylene, fahatsapana fanjaitra sarotra, izay ampiasaina amin'ny fitaovana fanariana fako toy ny press-press-press sy press-press filter-type.
Miantehitra amin'ny heriny manankarena, fitaovana mandroso, vokatra avo lenta ary serivisy feno, efa nahazo ny fahatokisan'ny mpanjifa anatiny sy iraisam-pirenena.
Nametraka ny kalitao sy ny trosa foana izahay tamin'ny toerana lehibe.